Khabiirka Kala Duwan: Sida Loogu Fiiriyo Trojan Botnet
Botnet Trojan wuxuu ku fidaa marka tallaabooyinka ammaanku aysan ahayn kuwo dhab ah oo lagu kalsoonaan karo. Isticmaalayaasha feejignaanta leh waxay heli karaan lifaaqyo ka imanaya kuwa aan la garanayn, kuwaas oo iska dhigaya inay yihiin kuwo aan waxba galabsan oo doonaya inaad ka qayb qaadato macaamilo internet ah. Tani, waxay ku weydiinayaan inaad ku riixdo xiriiro khaas ah, kuwaas oo aan ahayn amaan. Infakshanka Trojan wuxuu badiyaa ku faafaa xirmooyinkan laga shakiyo ama xiriiriye. Waxay ku jiraan wakiilo bot ah oo lagu rakibo nidaamkaaga waxayna u egtahay jaamicado - شركة نقل عفش في الرياض. Jack Miller, 8 Semt Maamulaha Guusha Macaamiilka, ayaa sheegay in inta badan kiisaska kaararka loo yaqaan "botnet Trojan" la soo sheego markii nidaamyada ay saameyn ku yeeshaan rootkit gaar ah ama faragalinta Trojan ama marka koodhka xun ee lagu galo nidaamka kombiyuutarka Qayb ka mid ah xusuusta
Sidee infekshanku u faafaa?
Sida barnaamijyada kale, boorsooyinka Trojan ayaa si kala duwan u faafiya oo waxay hoos u dhigaan tiro badan oo qalabka kombiyuutarada ah. Barnaamijyadani waxay qayb ka noqdaan qalabka kombuyuutarka oo ha kuu sheegin inay si firfircoon u qabtaan hawlo sharci darro ah. Qeybaha badankood, boorsooyinka Trojan iyo infekshinka waxay abuuraan qoritaanka qaabeynta qalabkaaga waxayna yareynayaan waxqabadka guud iyo shaqeynta.
Sidee looga qaadaa boorsooyinka trojan ee nidaamkaaga?
Nasiib darro, ma jirto siyaabaha looga hortagi karo imaatinka Boorsada "Trojan botnets" iyo kuwa kale, laakiin waxaad ka saari kartaa kombuyutarka shan siyaabood oo kala duwan.
Habka # 1: Isticmaal Autoruns
Nidaamka # 2: Ka saar cache
Markaad barnaamijkan dejiso, ha ilaawin inaad ceshato xaanshiyahaaga. Halkaan halkan iigu sheego in badi baaskiilada Trojan ay ka tagayaan jajabkooda xitaa markaad ka saarto. Sidaa daraadeed qashin-saarku wuxuu hubin doonaa in dhammaan jajabkoodu ay sidoo kale soo saaraan, oo uma baahnid inaad u ordid tallaabooyinka kale ee ammaanka.
Habka # 3: Ku rakib barnaamijyada antivirus ama anti-Trojan iyo cusbooneysii
Waa inaadan iloobin inaad rakibto barnaamijyada antivirus iyo anti-trojan iyo in ay maalin walba cusbooneysiiyaan. Barnaamijyadani waxay kaa caawin doonaan inaad ka saarto dhamaan bacaha qalabka, iyo weerarka DoS ayaa sidoo kale laga hortagi karaa in badan. Hubi inaad haysatid sharooto amnigaaga ah oo la cusbooneysiiyay oo aadan dareensanayn inaad ka gadan karto iibsigooda si aad u iibsato qaababka iyo sifooyinka dheeraadka ah.
Muujiyey barnaamijyada antivirus iyo qalab lid ku ah khalal gelinta
Kaspersky, ESET Nod32, Avast, AVG, BitDefender, Antivir, iyo Trend Micro waa barnaamijyada ugu guulaha badan ee lagu kalsoon yahay oo aad isku dayi karto. Barnaamijyada ladagaallanka ladagaallanka ah waxaa ka mid ah Malwarebytes, Emsisoft, iyo Zemana. Waxaad soo dejisan kartaa oo soo saari kartaa mid kasta oo ka mid ah antivirus ama barnaamijyada ladagaallanka khayaanada leh si aad uga takhalusto boorsooyinka Trojan ee dhowr daqiiqo gudahood. Dhammaantood waxay muujiyaan macluumaad ku saabsan sida qalabka khatarta ah ee Trojan uu ku faafo nidaamyadaada waana inaadan ilaawin inaad sameyso baaritaanka mar kasta oo aad computer-kaaga soo celiso.